Chipo cheKisimusi che FC Barcelona kune vatambi vayo ndeye iPhone 7 | IPhone nhau
Chipo cheKisimusi che FC Barcelona kune vatambi vayo ndeye iPhone 7
Kisimusi yasvika, mweya nezvipo. Izvo zvinofanirwa kunge zvakafunga Mutungamiriri weFC Barcelona, ​​uye ndizvo Josep María Bratomeu anga asina imwe pfungwa nyowani kunze kwekupa iyo iPhone 7 kune vese vatambi vari muchikwata, chidiki chinotsiva chipo chetsika yeKisimusi tswanda inoita kunge isina musoro kana kusanzwisisa. Uye chokwadi ndechekuti nyeredzi yemitambo kana yeimwe nzvimbo yatisingaone ichifamba ne iPhone yake nyowani isingawanzoitika, hatizive kana nekuda kwezvikonzero zvetsika kana nekuti iyo Cupertino kambani inovapa, asi icho chinhu chine zvave zvakadaro kwenguva refu. At the least, isu tinowana iyo "chipo" kuda kuziva.
Uye ndezvekuti kuva vakatendeseka, ivo vatambi vanobhadharisa mamirioni ema euro kwechikamu chikuru, uye iPhone 7 chishandiso chakatangwa pamusika munaGunyana. Iko pano apo isu patinobvunza kukosha kwechipo, nekuti isu tine kusahadzika kwakawanda pamusoro pekuti zvechokwadi chero mumwe wenhabvu muchikwata angadai aida iPhone 7 panguva iyoyo, anga atove nayo. Muchokwadi, vatambi vakaita saNeymar vakaonekwa nguva zhinji ne iPhone yavo, saka ichave yechipiri yavanayo.
Tswanda yeKisimusi idhisheni yechinyakare yebasa reSpanish, uye zvaizove zvine musoro zvakanyanya pane kupa vatambi vemabhirionea mukana wekuva nharembozha. Neiyi nzira, shamwari dze Marca vanodzinga chipo chaBartomeu kuvadiki vake se "chakanyanya", uye nokutendeseka, anogona kunge ari pachokwadi. Kunyangwe dai ndakavapa iyo Apple Watch, chishandiso chakanangana nemitambo uye hutano hwekuteedzera, zvaizove zvine musoro zvakanyanya kuti iyo iPhone 7, muchidimbu, Apple iri kupinda zvakadzika mukati mevashandi veFC Barcelona, ​​zvisinei, iyo Cupertino kambani haisati ichitsigira chero timu hombe muEurope.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Chipo cheKisimusi che FC Barcelona kune vatambi vayo ndeye iPhone 7
Space Marshals 2 inowanikwa chete ma0,99 euros
Apple patents 3D mapping system kuburikidza neiyo iPhone kamera